ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေး နှောင့်နှေးရခြင်း တရုတ်နှင့် မဆိုင်ဟုဆို | ဧရာဝတီ
လဖိုင်| July 19, 2012 | Hits:4,203
2 | | ကချင်ဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အပစ်ရပ်ရန် ကိစ္စ နှောင့်နှေးခက်ခဲ နေရခြင်းမှာ အများထင်ကြေး ပေးသကဲ့သို့ တရုတ်သြဇာ သက်ရောက်မှုကြောင့် မဟုတ်ကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) အနေဖြင့် ဇန်န၀ါရီ ၁၈ နှင့် ၁၉ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှ ဦးအောင်သောင်း ဦးဆာင်သော အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် အဆင့် ၃ ဆင့်ပါ အဆိုပြုလွှာ တင်ခဲ့သည်။ ယင်းအဆိုပြုလွှာတွင် ပထမအဆင့် တိုက်ပွဲများ ရပ်သွားစေရန် ကြိုးစားရမည်၊ အပစ်ရပ်စဲပြီးမှ ဒုတိယ အဆင့်ဖြစ်သော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်မည်ဟု ပါရှိသည်။
“ကျနော်တို့ကတောင် ဒုတိယအဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကို သွားဖို့ပြောနေတာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဘာလို့ ဒီအဆင့်ကို မတက်တာလဲလို့ ဦးအောင်မင်းကို ကျနော် မေးထားသေးတယ်” ဟု ဦးဂွမ်မော်က ပြောသည်။
လက်ရှိ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံမူများတွင်လည်း ဆွေးနွေးပွဲများ အရှိန်ရလာပါက ပုံစံပြောင်းသွား သည်မှာ ၃ ကြိမ်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
KIA က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသာမက နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးရန်ပါ ကမ်းလှမ်း ထားသော်လည်း လက်ရှိ အချိန်ထိ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွဲသာ များနေသေးကြောင်း၊ လတ်တလော တွင်လည်း တွေ့ဆုံရန် အတွက် နေရာ သတ်မှတ်ရန် အခက်အခဲကြောင့် ဇူလိုင်လ အစောပိုင်းက တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားမှုများ နှောင့်နှေးနေကြောင်း၊ အစိုးရ ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေ ဗန်းမော်မြို့တွင် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်သော်လည်း ဗန်းမော် လမ်းတလျှောက် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား နေခြင်းကြောင့် KIO က လွယ်ဂျယ်မြို့နယ်အနီး ပရန်ငွမ် ကျေးရွာတွင် တွေ့ဆုံရန် အဆိုပြုထားရာ ညှိနှိုင်းနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
KIO အနေဖြင့် တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဇွန်လ ၉ ရက် နောက်ပိုင်း အစိုးရနှင့် စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ရာ တရားဝင် တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံခြင်းများ ပေါင်းလျှင် ၉ ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
KIO ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ လိုင်ဇာဒေသရှိ ဂိတ်သည် တရားဝင်ဂိတ် မဟုတ်သော်လည်း တရုတ်အစိုးရက ရွှေအဆင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဂိတ်ပေါက်ဖြစ်သည်။
ယခုလ အတွင်းကပင် လိုင်ဇာသို့ လာသည့်လမ်းကို ပြည်နယ်လမ်းမကြီးအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် ခဲ့သည်။ လိုင်ဇာ လမ်းသည် မြန်မာပြည်နှင့် ကုန်စည် စီးဆင်းရာတွင် အတိုဆုံးလမ်းမလည်း ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းက ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့် ဒေသများသို့ ခရီးသွားလာကြမည့် တရုတ်နိုင်ငံသားများကို အထူးသတိ ထားကြရန် တရုတ်အစိုးရက သတိပေးထားကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဆင်ဟွာ သတင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရုတ် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကုမ္ပဏီ CPI သည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း၌ ရေကာတာများ ဆောက်လုပ်ခြင်းကို မြန်မာအစိုးရနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နေသည်။ CPI သည် ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းတွင် အဓိက လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်က ဒေသခံရွာသားများကို ဆန်များဝေငှပေးခဲ့သည်။ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ပြန်လည်စတင်ဖြစ်လျှင် ဒေသခံများ၏ နစ်နာမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်ဟုလည်း ပြောခဲ့သေးသည်။
KIA နှင့် အစိုးရတပ်များသည် ယမန်နှစ် ဇွန်လအတွင်းက တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၇ နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့သည့် အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်လည်း ပျက်ပြားသွားခဲ့ရသည်။ ယင်းတိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံ အရပ်သား ပြည်သူ ၇၅၀၀၀ ခန့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။
5 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Zaw Wate July 20, 2012 - 12:34 am	Dear Editor,
I’m from Macau.I cann’t read Myanamar Front.Please tell me how to downloadon it.
Reply	san July 20, 2012 - 9:01 am	where did get KIA’s arms from?china????????????
Reply	ညီနောင် July 20, 2012 - 12:03 pm	ဘယ်ကရလဲ သိချင် တယ်ပေါ့……သိတော့ဘာလုပ်မှာလဲ….
Reply	same July 24, 2012 - 12:18 pm	ဒေသ တခု (သို့) နိုင်ငံတခု ကို ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံက သြဇာလွမ်းမိုးဘို့ က လွယ်ပါတယ်။ခုတောင်မြန်မာပြည်ကို တရုတ်က ပညာတွေ တခုပြီးတခုပြနေပြီး။သြဇာလွမ်းမိုးတယ်ဆိုတာ ချပြစရာမလိုပါဘူး။ဆက်ဆံ ရေးကိုကြည့်တာနဲ့သိပါတယ်။ဒါဆို KIA တွေ ဘယ်ကလက်နက်ကို ဘယ်က ငွေနဲ့ ၀ယ်လဲ။KIA ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာလို့တရုတ်ပြည်မှာ နေနိုင်လဲ???????????????
Reply	swe htwe September 1, 2012 - 6:20 pm	We don’t believe this message. Why did KIA ask goverment to talk peace in China and how did he get arms?From ???? China !!!